Nhau - Blue Flame Colourant
Sekuziva kwedu tese, murazvo wehuni kazhinji unoita yero uye ndewechivara chakajairika, murazvo unoita yero kana kuti wakatsvuka zvishoma, izvo zvinozivikanwa nevanhu senguva dzose kubva pakutanga kusvika pakupisa kusvika kumagumo. Zvakare vanhu vajaira aya mavara, uye vasina chakakosha kana chisingakanganwike pamoto kudzimara murazvo.
Chikonzero nei vanhu vachida kubatidza moto wedanda wemuti ndechekuti vanhu havafanirwe kungonakidzwa chete nodziya unounzwa nemoto wemuti wematanda, kunyanya munguva yechando, asi zvakare vanzwe kunzwa kwakapfava uye kutapira, kudanana uye kwakasarudzika mamiriro akaunzwa nemurazvo.
Pamazuva evhiki, mhemberero kana mhemberero, vakuru, vana, shamwari, kitsi, imbwa, imba inodziya ine chinodziya moto, pamhenderekedzo yegungwa nemoto wemoto, ese aya anoita kuti tinzwe zvakanaka. Ehezve, panguva ino, murazvo wedu uchaburitsawo hunaku hwayo hwakasarudzika, mashiripiti ebhuruu. Ingoisa aya mabhegi madiki ane murazvo colorant mumoto wekampasi, uye murazvo unoshanduka kubva kune yero kana tsvuku kuita bhuruu ipapo ipapo. Zvino shamisa.
Ichi chingori chigadzirwa chedu isu tinochitumidza "bhuruu murazvo colorant" uye kutamba bhuruu murazvo kunakirwa nemhuri yakanakisa kana mufaro wepati munyika nevanhu kusvika vapera.